Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha jeermiska jeermiska iyo jeermiska Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Ilaalinta > Jeermiska iyo jeermiska
Qalabka ilaalinta waxaa loola jeedaa nooc ka mid ah qalabka difaaca ee lagama maarmaanka u ah ilaalinta badbaadada shakhsi ahaaneed iyo caafimaadka shaqaalaha ee habka wax soo saarka, kaas oo door muhiim ah ka ciyaara yaraynta khatarta shaqada.
Qalabka difaacu waa mid tayo leh oo dhamaystiran oo noocyo kala duwan leh, oo ay ku jiraan waji-xidhaha la tuuri karo, dharka ilaalinta la tuuri karo, galoofyada la tuuri karo, jeermiska jeermiska iyo jeermiska ilaalinta alaabta.
Isticmaalka sayniska ee Qalabka Ilaalinta waa cabbir muhiim ah si loo xaqiijiyo badbaadadayada shakhsi ahaaneed iyo caafimaadkayaga. Baili Kant daryeelka nolosha iyo caafimaadka!
Sampler Cervix iyo Qaabka Muunadda Makaanka
Sampler Cervix iyo Cervix Sampler Set: Sifaynta & Go'doominta DNA-da (oo ay ku jiraan genomic, mitochondrial, bakteeriyada, dulin & DNA viral) ee unugyada, candhuufta, dareeraha jidhka, unugyada bakteeriyada, unugyada, suufka, CSF, dareeraha jidhka, unugyada kaadida ee la dhaqay. Sampler Cervix iyo Cervix Sampling Set: Waxtarka sare, soo saarista DNA-ga gaarka ah, kordhinta ka saarida borotiinka wasakhaysan iyo xeryahooda kale ee organic ee unugyada. Qaybaha DNA-da ee la soo saaray waa kuwo waaweyn, nadiif sare, deggan oo la isku halleyn karo oo tayo leh.
suufka aruurinta iyo tuubada muunada
Tuubada Muunadda: Si loo nadiifiyo & go'doominta DNA-da (oo ay ku jiraan genomic, mitochondrial, bakteeriyada, dulin & DNA viral) ee unugyada, candhuufta, dareeraha jirka, unugyada bakteeriyada, unugyada, suufka, CSF, dareeraha jirka, unugyada kaadida oo la dhaqay .Ururinta Tuubbada Muunaha: Waxtarka sare, soo saarista DNA-ga gaarka ah, sare u qaadida ka saarida borotiinka wasakhaysan iyo xeryahooda kale ee organic ee unugyada. Qaybaha DNA-da ee la soo saaray waa kuwo waaweyn, nadiif sare, deggan oo la isku halleyn karo oo tayo leh.
Gaadiid suuf ah oo leh Dhexdhexaad
Gaadiidka suufka leh Dhexdhexaad: Sifeynta & go'doominta DNA-da (oo ay ku jiraan genomic, mitochondrial, bakteeriyada, dulinka & DNA-da viral) ee unugyada, candhuufta, dareeraha jirka, unugyada bakteeriyada, unugyada, suufka, CSF, dareeraha jirka, unugyada kaadida oo la dhaqay .Transport Swab leh Dhexdhexaad: Waxtarka sare, soo saarista hal gaar ah ee DNA, sare u qaadida ka saarida borotiinka wasakhaysan iyo xeryahooda kale ee organic ee unugyada. Qaybaha DNA-da ee la soo saaray waa kuwo waaweyn, nadiif sare, deggan oo la isku halleyn karo oo tayo leh.
Gaadiid suuf ah oo leh Tube
Gaadiidka suufka leh Tube: Sifeynta & go'doominta DNA-da (oo ay ku jiraan genomic, mitochondrial, bakteeriyada, dulin & DNA viral) ee unugyada, candhuufta, dareeraha jirka, unugyada bakteeriyada, unugyada, suufka, CSF, dareeraha jirka, unugyada kaadida oo la dhaqay . Gaadiidka Swab oo leh Tube: Waxtarka sare, soo saarista DNA-ga gaarka ah, sare u qaadida ka saarida borotiinka wasakhaysan iyo xeryahooda kale ee organic ee unugyada. Qaybaha DNA-da ee la soo saaray waa kuwo waaweyn, nadiif sare, deggan oo la isku halleyn karo oo tayo leh.
Swab Gaadiidka Nadiida leh oo leh Tip Dacron
Gaadiidka Nadiida Leh ee Dacron Tip: Si loo nadiifiyo & go'doominta DNA-da (oo ay ku jiraan genomic, mitochondrial, bakteeriyada, dulin & DNA viral) ee unugyada, candhuufta, dareeraha jirka, iyo buccal, ilmo-galeenka, unugyada maqaarka, unugyada bakteeriyada, unugyada, suufka, CSF Dheecaannada jirka, unugyada kaadida ee la dhaqay Qaybaha DNA-da ee la soo saaray waa kuwo waaweyn, nadiif sare, deggan oo la isku halleyn karo oo tayo leh.
Gaadiid suuf ah oo leh caarad cudbi ah, suufka gaadiidka nadiifka ah oo wata caarada polyesterka
Gaadiidka suufka leh caarada suufka, suufka gaadiidka nadiifka ah ee caarada Polyesterka: Sifeynta & go'doominta DNA-da (oo ay ku jiraan genomic, mitochondrial, bakteeriyada, dulinka & DNA-da fayraska) ee unugyada, candhuufta, dareeraha jirka, iyo buccal, ilmo-galeenka, unugyada maqaarka, unugyada bakteeriyada , unugyada, suufka, CSF, dareeraha jidhka, unugyada kaadida la dhaqay Qaybaha DNA-da ee la soo saaray waa kuwo waaweyn, nadiif sare, deggan oo tayo ahaan la isku halleyn karo.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Jeermiska iyo jeermiska oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Jeermiska iyo jeermiska soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Jeermiska iyo jeermiska la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.